Mareykanka oo xadidaya dadka ka imaanaya Hindiya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Mareykanka oo xadidaya dadka ka imaanaya Hindiya
Mareykanka oo xadidaya dadka ka imaanaya Hindiya
Maraykanka ayaa sheegay inuu xaddidi doona dadka ka imanaya Hindiya, laga bilaabo bishan Maajo ee sanadkan, Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay Jimcihii, in ay ka walwalsanyahiin kor u kaca ba’an ee kiisaska COVID-19 iyo noocyokale oo halis ah kana mid ah coronavirus, oo ka soo ifbaxay waddanka.
Xoghayaha warfaafinta ee Aqalka Cad Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Joe Biden ay go’aan ka gaareen ka dib markii ay arkeen talooyinka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada COVID-19 ee (CDC).
“Siyaasaddan ayaa la fulin doonaa iyadoo la tixraacayo kiisaska culus ee aan caadiga ahayn ee COVID-19 iyo noocyo badan ee laga helay Hindiya,” ayay tiri Jen Psaki
Warkan ayaa ka dhigan in inta badan muwaadiniinta aan Mareykanka ahayn ee ku sugnaa Hindiya, aan loo oggolaan doonin inay safar ku galaan Mareykanka.
Warkan ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu yiri: Waxaa jira waxyaabo badan oo ka reeban deganaanshaha joogtada ah ee Mareykanka, xubnaha qoyska iyo sidoo kale qaar ka mid ah muwaadiniinta kale ee aan Mareykanka ahayn.
Mareykanka oo xadidaya dadka ka imaanaya Hindiya was last modified: May 1st, 2021 by Admin
In ka badan 20-qof oo ku dhimatay diyaarad militeri oo ku bur-burtay Ukrain